Home / समाचार / अनमोलको ‘कृ’ले कति कमायो दुई दिनमा ?
अनमोलको ‘कृ’ले कति कमायो दुई दिनमा ? 0
समिक्षक र दर्शकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको ‘कृ’ले दुई दिनमा करिब २ करोड बढीको कमाई गरेको छ । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चलचित्रले पहिलो दि देशभरबाट ९७ लाख ३ सय ७५ रुपैयाँ कलेक्सन गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै शनिवारको दिन १ करोड ६८ लाख ५३ हजार २ सय ३३ रुपैयाँको ग्रस कलेक्सन गरेको छ ।